Awoodda sawirka: Ku hafashada badda - BBC News Somali
Awoodda sawirka: Ku hafashada badda
Lahaanshaha sawirka ALESSIO PADUANO
Image caption Sawirkan waa midka uu ka sheekeynaayo ALESSIO PADUANO
Markii kooxda badbaadinta ee Sea-Watch 3 la soo gaarsiiyay farriin naxdin leh oo ka timi doon bac ka sameysan oo ku degtay meel ku dhow xeebaha Liibiya, Sawirq aade Alessio Paduano wuxuu helay fasax uu dhacdada ku soo tabiyo.
Wuxuu sharaxay sida uu ku qaaday sawir muujinaya nin dhibaato ay ka haysato siduu isu badbaadin lahaa. Ninkaasi wuxuu ka mid ahaa tahriibayaasha doonayay in badda Mediterranean-ka ay ka gudbaan si ay u gaaraan Yurub.
"Waxay ahayd xiili barqa ah, doontana waxay xeebaha Liibiya u jirtay 30 mile, oo biyaha caalamiga ah ayey ku sugnayd. Markii aan aragnay doon bac ah oo tahriibayaal ay saaran yihiin, laba doomood oo samata bixin ah ayaa la diray, aniga mid ka mid ah baan saarnaa", ayuu yiri sawir qaadaha.
"Waxay ahayd xaalad aan caadi ahayn, markii aan boqollaal mitir gudaha u galnay badda, waxaan maqlayay qeylada iyo sawaxanka ka soo baxayay tahriibayaasha oo dhinac kasta ka imaanayay. Qaylada waxay ahayd mid xitaa ka dheereysay shanqarta biyaha.
"Dadka biyaha ku dhex jiray way dabaalanayeen si aysan badda ula tagin, mid ka mid ah kuwa dhibbanaa nasiibdarro, wuxuu ahaa qof ii dhow. Dhibaato ayey ku ahayd in uu madixiisa ku ceshto biyaha.
"Markii aan qaaday sawirkan, waxaan maqlayay in biyaha ay dhibayeen oo uu neefsan la'aa. Qaabkii uu u neefsanayay weli maskaxdeyda ayey ka dhex guuxeysaa.
"Bini-aadam ahaan, markasta waxaan filayaa in aanan tagin meel sidaasoo kale ah, laakiin sawirqaade ahaan kama fogaan karo in aan u joogo wixii aan arkay wax la mid ah, xitaa haddii ay ka sii xun tahay.
"Waxay ahayd dareen adag balse nasiib wanaag xoogaa ka dib kooxda badbaadada ayaa xaggiisa u dhaqaaqay si ay badda uga soo saaraan, wuxuuna ku dhowaad in uu dego oo badda ay la tagto. Kooxda samata bixinta, dadaal dheer oo dhibbadan ka dib way ka soo badbaadiyeen badda."
UN oo sheegtay in 5,000 oo qof ay badda ku dhinteen sanadkan
Ilaalada xeebaha Talyaaniga oo tahriibeyaal soo badbaadiyey